मोटोपनकै कारण अनेक रोग लाग्ने भय पनि छ । त्यसैले उनीहरु माोटोपन घटाउन जुक्ती खोजिरहेका हुन्छन् । | Nepal Dabali
२६ जेष्ठ २०७७, सोमबार ११:५७ 1 Comment on मोटोपनकै कारण अनेक रोग लाग्ने भय पनि छ । त्यसैले उनीहरु माोटोपन घटाउन जुक्ती खोजिरहेका हुन्छन् ।
अहिले धेरैको लागि टाउको दुखाईको विषय हो, तौल कसरी घटाउने ? मोटोपनको समस्या छ । मोटोपनकै कारण अनेक रोग लाग्ने भय पनि छ । त्यसैले उनीहरु माोटोपन घटाउन जुक्ती खोजिरहेका हुन्छन् ।
तर, कतिपयलाई भने घट्दो तौल वा खिरिलो ज्यानको सुर्ता छ । ज्यान कसरी बनाउने ? कसरी मोटोघाटो हुने ? उनीहरु उपायको खोजीमा हुन्छन् ।
दैनिक दुई वटा स्याउ सेवन गर्नुपर्छ । यसले भोक जगाउन मद्दत गर्छ । भोग जागेपछि हामी खाना खान्छौ, जसले तौल बढाउँछ